Waddada Madaxtooyada Ee Xukuumaddii Hore Xidhay Oo Dawlada Cusubi Xalay Xayiraadii Xalay Ka Qaaday | Somaliland.Org
July 29, 2010	Waddada madaxtooyada hor marta ee xukuumadii hore ee madaxweyne Daahir Rayaale ka mamnuucday inay isticmaalaan habeenkii wixii ka danbeeya 6:00-da maqribnimo gaadiidka, ayaa habeenkii xalay ay xayiraadii ka qaaday xukuumada cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, islamarkaana loo ogolaaday inay isticmaalaan gaadiidku.
Waddada madaxtooyada hor marta ayaa xukuumada hore xidhay sanadkii 2008-kii bishii October 29 keedii ka dib markii weeraradii qaraxyada ahaa ee caasiamada Hargeysa ay ka fuliyeen argagixisada ka dagaalanta Somalia, ayaa laga xidhay in dadka iyo gaadiidkuba ay isticmaalaan, balse muddo ka dib ayaa maalintii oo qudha loo faxasay gaadiidku inay maraan wadadaasi halka dadka lugta ahna muddooyinkii danbe habeenkii mari jireen.
Mararka qaar ayaa oo ciidamada amaanka loo soo sheego arrimo shaki leh oo ka dhan ah amaanka ayaa ugu horaynba talaabada ay qaadaan waxay ahayd, in waddada madaxtooyada hor marta duhurka cad-ba ay xidhaan, islamarkaana xataa dadka lugaynaya laga mamnuuco inay maraan.
Waddadan madaxtooyada marta aya ah waddada halbowlaha caasimada, taasoo xidhiidhisa suuqa iyo shacabka magaalada oo ay u badan yihiin hay’adaha dawlada oiyo kuwa caalamiga ahba, islamarkaana ay isticmaalaan gaadiid farabadan iyo dadka lugaynayaba, taasoo cadibaad ku ahayd dadka iyo gaadiidkaba oo ay ka soo wareegi jireen wareeg dheer, cadibaadna ku ahayd dadka waaweyn ama xanuunsanaya.
Malmaha qaar ayaa waxa dhici jirtay in ciidanka bilayska loo soo sheego gaadhi looga shakiyay qaraxyo oo ciidamadu islamarkaaba xukuumadu amar ku siin jirtay in waddada xayiraad laga saaro dadka lugaynaya iyo gaadiidka maalintii maraya.
Furitaanka waddadan xalay ay fasaxday xukuumada cusub ee madaxweynaha shalay xilka loo dhaariyey, inay isticmaalaan gaadiidku ayaa dadweynaha ku nool Hargeysa si weyn u soo dhaweeyeen, taasoo ay u arkeen inay ka hor qaaday xukuumada cusub caqabad weyn oo ummada ka hor taagnayd isticmaalka wadada ee habeenkii.
Talaabdan ay xukuumada cusubi durba wadadii ummada habeenkii ka xidhnayd ayaa dareenka dadweynaha siu weyn usoo jiidatay. Haatuf
Previous PostKhudbadihii xiisaha lahayd ee madaxweynaha cusub iyo arrimihii uu diirada saaray.Next PostNew Government, New Dawn	Blog